waan ilmi namaa hundi haala salphaan rakkoo takka malee raawwachuu danda’u keessaa inni tokko nyaata alanfatee liqimsuu dha. Midhaan alanfatanii liqimsuun waan guyyaa hunda itti oollu waan teef, waan akkaan salphaa keessatti ramadama. Nyaata alanfanne gad liqimsuudhaaf ulaagaalee barbaachisan xiinx
Dachii tanarra wanti jiru hundi isaatuu maqaa fi amala mataa isaa qaba. Akkasumas wantoonni dachii tanaan ala jiranis maqaa fi amala mataa isaanii qabu. Wanti maqaa qabu tokko zaataan jiraachuun isaa dirqama. Wanti hin jirre ammoo Abadan maqaa hin qabu. Warroonni Saayinsiin guddannee jirra jedhan,
kitaabni Dikshinarii ykn hiikkaa jechootaa, kan jechoota kuma 20 qabu isinitti kennamee, jecha kitaaba san irra hin jirre takka akka itti dabaltniif Osoo gaafatamtanii, Jecha haarawa itti dabaluun dura jalqaba maal gochuu qabdan? …. Jalqaba jechoota kitaabicha irra jiran kuma 20nuu qomatti galfachuu
Addunyaa tanarra carraalee heddutu jira. Carraa nuti lakkoofnee xumuru hin dandeenye. Uumamni dachii tanarra jiru ammoo tokkoon isaallee mudaa hin qabu. Hundi isaatuu akka isaaf malutti uumame. Kanaaf wanti Rabbi uume hundi isaatuu uumama ajaa’ibaa irratti uumame jenna. Wanti ilmi namaa hojjatu garu
Wanti akka tasaa argame hin jiru. Uumamni Hundi isaatuu Dizaayin godhamee lafa kaayame. Harki keenya harka keenya. Harki uumama biraa nuuf hin ta’u. gosti harkaa garuu heddutu jira. Isa kamtu nuuf ta’aa murteessuuf ammoo dizaaynara barbaachisa.Amma Namoota Diizaayina kaasuu danda’an walitti qabnee D
Warri amantii hin qabne, hawaan tun akka tasaa uumamte jedhan. “Addunyaa tanarra dur dhoohinsa guddaa Big Bang jedhamutu ture. Innis dhoohee gaasiiwwan garagaraa uume. Gaasiin kun ammoo gaalaaksiiwwan garagaraa uume. Gaalaaksiin kun ammoo Plaaneetota garagaraa uume. Plaaneetonni uumaman kunniin amm
Bineensi har’a daawwachuuf deemnu kun loon biyya keenyatti argamuun kan wal fakkaatu yoo ta’u, Maqaan isaa Yaak jedhama. Dabalataanis maqaa Gafarsa Eeshiyaa jedhamuun ni waamama. Akkuma harreediidaa fi harree manaa, bineensi kunis Yaak manaatiifi Yaak diidaa jedhamuun bakka lamatti qoodama. Lameenuu
Bineensi kun Tuatara jedhama. Tuataran sanyii lootuu biyya Niiwziilaand keessatti qofa argamuudha. Ardii Niiwziilaand irra dur hantuutni hin waan hin jirreef, Tuataran nagayaan jiraataa ture. Garuu gaafa koloneeffattoonni hantuuta gara biyyattii galchanii booda lakkoofsi isaa daran xiqqaachuu jalqa
Uumamni kun Jarboowaa jedhama. Uumamni kun sanyiiwwan garagaraa 30 ol qaba. Qubsumni uumama kanaatis naannoowan gammoojjii Afriikaa Kaabaa fi Eeshiyaati. Jarboowaan sanyiiwwan tuqaa utaalchaan beekaman keessatti ramadama. Uumamni kun sanyiiwwan midhaanii heddu waan barbadeessuuf, akkasumas dhukkuba
BINTUROONGBinturong bineensota akka Mongoose, Fossa, xirinyii fi Genets jedhamiin waliin walitti dhiheenya qaba. Uumamni kun maqaa Bearcat jedhamuunis ni beekama. Eddooon qubsuma isaatis Ardii Eeshiyaa keessa yoo ta’u, harraan tana garuu sababa adda addaatin lakkoofsi isaa xiqqaachaa akka jiru himam
MUKA KANA BEEYTUU?Sanyiin Muka kanaa sagaltu jira. Inni jahaa Maadaagaaskaar qofa keessatti argama. Lama dachii Afriikaa Kibbaa fi Arabiyaa keessatti Argamu. Inni tokko ammoo Ardii Awustraaliyaa keessatti argama. Mukni kun dachii goggogaa fi Rooba hin qabne keessatti guddata. Garuu furdinaa fi guddi
STINGRAYUumamni kunStingrayjedhama. Stingray Sanyii qurxummiiti. Qaamni uumama kanaatis kan ajaa’ibaati. Qaamni isaa akka eelee biddeenaa ykn ammoo akka sahanii midhaan irratti nyaannu diriiraadha. Garuu akka eelee fi sahanii san gabaabaa miti. Qurxummiin kun bishaan oowwa qabu filata. Akkasumas bis
Mee amma ammoo Xayyaara yaadaa yaabbannee gara ardii ameerikaa haa imallu. Bineensi hardhaaf isinii filadhes Sanyii Adurreeti. Bineensi kun Jaguarondi jedhamuun beekkama. Hedduminaanis biyyoota jiddu gala Ameerikaa, Kibba Ameerikaa Kaabaa (Southern Part of North America) fi Ameerikaa kibbaa keessat